‘गाउँपालिकामा निर्वाचितहरुले आफ्नै कार्यकर्तामात्रै चेप्नु राम्रो होइन’ -गंगा कुरुम्बाङ - Naya Online
शनिबार, फाल्गुन २९, २०७७ (March 13th, 2021 at 10:23pm ) अन्तर्वार्ता, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति
तेह्रथुम जिल्लाको फेदाप गाउँपालिका ऐतिहासिक स्थल हो । दश लिम्बुवानले संयुक्त राज्य शुरु गर्दा सेङ्सेङ्गुम फेदापहाङले पाएको फेदाप राज्यको नामबाट यस गाउँपालिकाको नाम जुरेको छ । साविक ओयाकजुङ, जलजले, सिम्ले, इसिबु र सम्दु गाविस मिलेर बनेको फेदापमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष गंगा कुरुम्बाङ छन् । उनी संघीय समाजवादी पार्टीको स्थापना भएपछि जिम्मेवार कार्यकर्ताको रूपमा अगाडि बढेका हुन् । उनीसँग नयाँ अनलाइनले गरेको कुरकानी यहाँ प्रस्तुत छ ।
जनता समाजवादी पार्टीमा कसरी संगठीत हुनुभयो ?
जनमुक्ति पार्टीबारे सुन्न पुगेको तर सम्पर्क हुन नसकेपछि अनेरास्ववियूमा सक्रिय थिएँ । पछि संघीय समाजवादी पार्टीको स्थापना भयो । त्यस पार्टीमा म संगठीत भएर लागेको हुँ । यो पार्टी खस समावेशी पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकता हुँदै आयो । गाउस्तरमा पनि समायोजन हुँदै आउँदा फेदापमा नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने आयो ।
गाउँपालिकाको मात्रै नेतृत्व गर्नुभएको छ कि अन्य जनवर्गीयमा पनि हुनुहन्छ ?
म पार्टीको जिल्ला समिति सदस्य पनि छु । र, पार्टीको युवा संगठनको जिल्ला इन्चार्ज पनि रहेको छु ।
पालिकामा पार्टीको स्थिति कस्तो छ ?
त्यस्तो उत्साहजनक त छैन । मध्यम नै हो । बाहिरीरूपमा चहलपहल नदेखिएता पनि वडावडासम्म पार्टी पुगेको छ । केही वडा सक्रिय छन् भने केही सामान्य छन् ।
केन्द्र, प्रदेश र जिल्लासँग गाउँको सम्पर्क कस्तो छ ?
केन्द्रसँग सिधै सम्पर्क छैन । प्रदेशसँग चाही प्रशस्त हुन्छ । पार्टी निर्माणाधिन भएकोले पनि होला । अब जिल्लामा समायोजन भइसकेको छ । तसर्थ केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्लासँग समन्वय अवश्य हुने नै छ ।
केन्द्रसँग सम्पर्क नहुनुको कारण ?
केन्द्रीय नेताहरू कमै आउँछन् । कुराकानी, सम्पर्क नहुनु नै प्रमुख कारण हो । समायोजन नहुनु एउटा कारण थियो । तर अब समायोजन भइसकेको छ । अब त्यस्तो समस्या हुन्न भन्ने ठानेको छु ।
गाउँको अन्य पार्टीको तुलनामा जसपाको स्थिति कस्तो छ ?
नेकपा, काँग्रेसपछिको तेश्रो स्थान जसपाको स्थान आउँछ । लिम्बुवान पार्टी पनि केही छ । अहिले नेकपा पूर्ववतः स्थितिमा आएर एमाले र माओवादी बनेपनि जसपा नै तेश्रो हो भन्ने अनुमान हो ।
स्थानीय निर्वाचनमा जसपाको स्थान कस्तो थियो ?
म आफैँ पनि स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएको व्यक्ति हुँ । झिनो मतले पराजित भएको हुँ । सिंगो फेदाप गाउँपालिकाको मत गन्दा हाम्रो पार्टीको स्थान तेश्रो नै थियो ।
आगामी निर्वाचनमा पार्टीको स्थिति कस्तो होला ?
अहिलेको माहौल हेर्दा राम्रो जस्तो लाग्छ । मानिसहरूले कुरा बुझिरहेका छन् । हाम्रो पार्टीको खास कुरा जनतामाझ लैजान सकिएको छैन । तर जनताले चाहेको कुरा हाम्रो पार्टीमा छ ।
फेदाप गाउँपालिकाका राजनैतिक आवाज उठाउनुपर्ने कुरा केके हुन् ?
धेरै कुरा छन् । आवाज त राजनैतिक पूर्वाग्राह नराखीकन उठाउनुपर्ने हो । तर पहिलो, दोश्रो पार्टीहरूले नै पूर्वाग्राह राख्छन् । पीडितहरूले पाउनुपर्ने सेवासुविधा पाएका छैनन् । फेदाप १ को दक्षिणीक्षेत्रको सुख्खा क्षेत्र हो । पूर्व, पश्चिम र उत्तरी क्षेत्र खेतीयोग्य तथा प्रशस्त अनाज उत्पत्ति हुने स्थल हो । अनाजहरूलाई विनिमय गरेर जिविका चलाउने कार्य प्रशस्त हुन्छन् । ति कार्य भइरहेता पनि सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाई तथा वेरोजगारी प्रमुख समस्या बनेका छन् । गाउँमा सिमान्तकृत जाति, समुदायहरू पनि छन् । उनीहरूलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन सकिएको छैन ।
गाउँपालिकाले केकस्ता कामहरू गरिरहेका छन् ?
गाउँपालिकाकाले आश्वासनहरू राम्ररी देखाएका छन् । तर कामहरू अधुरा छोड्ने गरिरहेको छ । जस्तै फेदाप १ मा ११ साइजको फुटबल ग्राउण्ड अलपत्र छ । चिचिलिङ पोखरी सुकाइएको छ । डीपबोरिङको अवस्था लथालिङ्ग छ । खोलाबाट ट्रयाक्टरबाट पानी बोकेर खानु परिरहेको छ । पालिकाले पारदर्शी ढङ्गले काम गरिरहेको देखिन्न । पालिकामा विजेता बनेका पार्टीका कार्यकर्तालाई बढि च्याप्ने, राहत प्रदान गर्ने गरेको छ ।
पालिका अध्यक्षले त विजेता बनिसकेपछि सबै पार्टीको नेता तथा अभिभावक हुँ भनेका छन् नि ?
पालिका अध्यक्षसँग चाहीँ सकरात्मक विचार पाउँछु । उहाँ सन्तुलित हुनुहुन्छ । तर उहाँका सल्लाहकार खराब छन् भन्ने लाग्छ । त्यो खराब बिचारले उहाँको राजनीतिक भविष्य पनि अन्यौल पार्ने देखेको छु ।
गाउँपालिकाको रूपमा ५ वटा गाविसलाई मिलाएर पहिलोपटक सिंगो पालिका बनाइएको छ, यसलाई जनताले कसरी लिएको छ ?
सम्दु, ओयाकजुङ गाउँबाट पालिकाकाको सदरमुकाम टाढा भयो, धाउन गाह्रो भयो भन्ने गुनासो छ । तर तमोरदेखि पोक्लाबाङ आइपुग्न पनि उत्तिकै समय र दुरी छ । तसर्थ जसोतसो ठीकै छ, हिजो गाविसमा गर्नुपर्ने काम वडामा भइरहेको छ भन्ने तरिकाले बुझ्न थालेका छन् भन्ने लाग्छ ।
बसपार्क र हेलिप्याड बनाउने निहुँमा लिम्बूहरूको पुरानो चिहान भत्काइयो थियो, यो गाउँपालिकाको गल्ति हो कि उपभोक्ता समिति ?
यस काममा उपभोक्ता समिति र पालिका दुवैले जिम्मा लिन मानेनन् । बसपार्कको लागि प्रेम निङ्लुक र नन्द निङ्लेकुले जग्गा दिएका हुन् । उक्त जग्गा छेउमा सामुदायिक वन पनि थियो । बसपार्क खन्दै गर्दा छेउको डाँडामा हेलीप्याड बनाउँदा हुन्छ भनेर डोजर लगाइएको रहेछ । तर खन्दा मानव कंकाल निस्कियो । लिम्बूहरूको पितृवास (समाधिस्थल)लाई त्यसरी डोजर लगाइँदा विश्वभरबाटै विरोध आयो र कार्य बन्द भएको छ । गाउँपालिकाले थाहा नभएको र उपभोक्ता समितिले योजनावद्ध नगरेको भनेपछि यो मुद्दा त्यतिकै भयो ।
हालै लिम्बूहरूको १८ थरहरूले संयुक्तरूपमा माङ्गेना यक भेला गरे, यस्ले गाउँपालिकामा कस्तो असर पार्यो ?
यो ऐतिहासिक सम्मेलन थियो । पोक्लाबाङ यक मान्ने सबै थरहरूलाई समेट्ने कार्य गर्यो र इतिहास खोतल्ने कार्य गर्यो । म स्वयं पनि यससम्बन्धमा अनविज्ञ थिएछु । यसले मलाई बुझाउने काम गर्यो । म मात्र नभएर १८ थरीलाई पनि बुझाउने काम गर्यो । यो सम्मेलनसँगै पोक्लाबाङस्थीत थाम्रुङ (थामालुङ, मानिस झरेको विश्वास लिएको)को शिरमा भगवति मन्दिर बनाइएको छ । मन्दिर बनाइयो, ठीकै छ । तर मन्दिरको पछाडि थाम्रुङ शिर रहेको, जसलाई फोहोर गर्नु हुन्न, टेक्नु हुन्न विश्वास गरिएको थियो, त्यहाँ अपवित्र बनाउने, फोहोर गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसको लागि सम्बन्धित निकाय र ऐतिहासिक भेलाले बनाएको नयाँ समितिले रोक्ने, बारबेर गर्ने कार्य गरोस् भन्ने माग गर्दछु ।